प्रदेश १ को आ.ब. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठसहित) - Shikhar Post Shikhar Post
प्रदेश १ को आ.ब. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठसहित)
प्रदेश नं १ को सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज पेश भएको छ । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३५ (१) बमोजिम प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी‘प्यासी’ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सो कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको महामारीद्वारा सिर्जिएको सङ्कटबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्नु प्रदेश नं १ सरकारको पहिलो दायित्व हुने हुने उल्लेख छ । नीति कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा स्वास्थ्य र कृषि पहिलो प्राथमिकतामा रहने उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति : शनिबार, २४ जेष्ठ २०७७ १९:१६